Dowladda oo ku dhawaaqday in la joojiyey muxaadaradii Sheekh Umal – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la baajiyey muxaadaradii lagu madalsanaa in Sheekh Maxamed Cabdi Umal uu ku qabto magaalada Muqdisho.
Wasaaradda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Sheekh Umal uu isagu go’aansaday in la baajiyo muxaadaradaas isagoo tix galinaya daruufaha ku xeeran muxaadarada oo la doonayey in galabta Axadda ah ee berrito lagu qabto garoonka cubadda cagta ee Eng. Yariisow.
Wasaaradda Awqaafta ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay Sheekha Maxmed Umal ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigalineed xilliga ku haboon, isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culumada Soomaaliyeed ee diyaarka u ah wacyigalinta bulshada Soomaliyeed oo xilligan baahi weyn loo qabo.
Culimada dariiqada Suufida ayaa wacad ku maray inay ka hor tagi doonaan in Sheekh Umal uu muxaadaro ku qabto magaalada Muqdisho, waxaana jirtay in shalay ay dowladdu guddi heer wasiirro ah xil saartay qaban qaabada muxaadaradaas.
Hoos ka akhriso qoraalka Wasaaradda:
NISA oo soo bandhigtay muuqaal laga duubay nin maanta Qarax ka geystay Muqdisho